Record Music Site Spotify na gụgharia ka PC / Mac
Record Music Site Spotify / gụgharia ka PC / Mac
Nzọụkwụ 1. Site Spotify / gụgharia ka iTunes
The nnọọ Nzọụkwụ mbụ bụ idekọ music si Spotify gị iTunes Library na n'ihi na nke a nzọụkwụ si Site Spotify / nuuru na-iTunes ndu ga-agbasoriri.
Nzọụkwụ 2. pịa "Kọrọ" na ekpe menu
Ugbu a na n'aka ekpe menu nke TunesGo peeji, gaa na nhọrọ nke "dere" n'okpuru iTunes Library. (Nseta ihuenyo egosi họrọ red n'ọkpụite igbe). Ndị a bụ ndepụta nke songs na e mbụ dere si Spotify gị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Ugbu a si dị ndepụta nke songs, họrọ ndị na ị chọrọ nyefee gị PC / Mac. (Nseta ihuenyo egosi 2 họrọ songs)
Ugbu a gaa n'elu ọtụtụ menu mmanya na họrọ "Export" nhọrọ na ga-emeghe a dobe ala ndepụta na a na ndepụta họrọ "Mbupụ na kọmputa m."
Ugbu a ị chọrọ iji họrọ nchekwa nke ị chọrọ songs na-ịchekwa na gị PC / Mac. (Nseta ihuenyo-egosi "My Music" dị ka nchekwa)
Ozugbo songs na-agafere, a ozi nke ọma bupu ga-anya.
Ọzọ: Record Music Site Radio na iTunes